Blinken “COVID-19 looma adeegsan karo in lagu xadgudbo xoriyadaha aasaasiga ah | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Blinken “COVID-19 looma adeegsan karo in lagu xadgudbo xoriyadaha aasaasiga ah
Blinken “COVID-19 looma adeegsan karo in lagu xadgudbo xoriyadaha aasaasiga ah
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa sheegay inaan waddanna loo oggolaanin inuu xanunka Covid-19 u adeegsado inuu ku xadgudbo xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah.
Blinken waxa uu hadalkan u jeediyey shir ku saabsan Covid-19 iyo tallaalka oo uu yeeshay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay 17-kii bishan Febraayo.
Blinken ma magacaabin waddan gaar ah markii uu hadalkaasi jeedinayey, waxaase uu ku baaqay in waddamada lagula xisaabtamo waajibaadka ka saaran ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Dawlada Soomaaliya ayaa isla maalinta uu hadalkaasi jeediyey waxay soo saartay amar ay ku joojinayso isku soo baxyada iyo in la isku yimaado iyadoo sheegtay inay tallaabadaas u qaadday ka hortagga faafidda Covid-19 darteed. Ma cadda in hadalka Blinken uu ku socday Soomaaliya.
Tallaabada ay qaadday dawladda Soomaaliya ayaa timid laba maalmood ka hor markii uu dhici lahaa bannaanbaxyo ay ku baaqeen mucaaradka oo ku beegnaa 19-ka Febraayo, kaasi oo gacan ka hadal ka dhashay iyadoo dhinacba kan kale u uku eedeeyey inuu soo weeraray.
Dhinaca kale, Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay inay muhiim tahay in caalamku uu si wadajir ah uga hortago kana guulaysto Covid-19, iyo cudurro kale oo faafa oo mustaqbalka yimaada. Blinken waxa uu sheegay in Maraykanku ay 20-kii sano ee lasoo dhaafay ku bixiyeen lacag dhan 140 bilyan oo dollar gargaarrada caafimaadka dunida.
Waxa uu Blinken sheegay in dhamaadka bishan ay Maraykanku siin doonaan Hay’ada Caafimaadka Adduunka ee WHO lacag dhan 200 milyan oo dollar oo ah waajibkii kusoo aaday Maraykanka.
Waxa uu ugu baaqay dhammaan waddamada inay la dagaalamanaan dacaayadaha aan jirin eel aga faafiyo tallaalka, waxaana uu sheegay in haddii aan taas la samaynin la boqongoynayo hadafkii la lahaa.
Previous articleMadaxtooyada Soomaaliya oo goor dhoweyd war-murtiyeed kasoo saartay shirkii manta..
Next article Jubbaland oo mowqifkiisa ku aadan doorashooyinka muranku ka taaganyahay soo bandhigay..
Askari Maraykan ah oo magaalada Ohio ku toogtay gabar
Sarkaal booliis ah ayaa magaalada Ohio ku toogtay gabar madow ah oo dhalinyaro ah xilli ay ka jawaabeysay isku day dil mindi ah. Toogashada ayaa...
Maxamed Mursal oo xafiiskiisa ku qaabilay Ergeyga gaarka ah...
RW Rooble oo Qarka u saaran guuldaradii Ex- RW M Xawaadle...
Wadooyinka Muqdisho oo laga qeyliyey
Guddoomiye li Jeyte oo dhagax dhigay Feer-feer Ceel biyood Riig ah...